Ukucwangciswa kwezahlulo ngokuchanekileyo- iK-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining ibonelela ngeenkonzo ze-OEM / i-ODM, siyakwazi ukubonelela ngobuchule kuluhlu lweenkokheli zeshishini kwimarike. Iinkonzo zethu zokugaya zibandakanya i-CNC ye-machining machining, kwaye iimveliso zethu zihlala zisetyenziswa koomatshini, i-elektroniki, i-automation, imoto, ezonyango, amandla amatsha kunye neminye imimandla.
Yintoni inkqubo yekhompyutha yokugaya amanani wokugaya?
I-CNC yokugaya isebenzisa isixhobo sokusika esijikelezayo esifana nokubhola, ngaphandle kokuba isixhobo esinye sihamba ngamazembe ahlukeneyo ukwenza iimilo ezahlukeneyo, kubandakanya imingxunya kunye nendawo zokubeka. Yindlela eqhelekileyo ye-CNC machining kuba yenza imisebenzi yokomba kunye ne-lathing. Le yeyona ndlela ilula yokugrumba imingxunya kuzo zonke iintlobo zezinto zepremiyamu ukuvelisa imveliso elungileyo yeshishini lakho.
Precision wokugaya kunye neenkqubo kakuhle CNC
Ngonikezelo lwesipholisi sokuphotha lwethu, sinako ukusika izinto ngokukhawuleza kuneenkqubo zokutshiza ezipholileyo eziqhelekileyo, kunye ne-CAD / CAM, UG kunye nePro / e yethu, i-3D Max. Unganxibelelana ngokufanelekileyo nabathengi ngobuchwephesha kwaye ukhawulezise inkqubo yonke kwaye ubonelele ngemveliso ngokusebenza okuphezulu. Amaziko ethu amabini okusila e-CNC afaka ii-knuckles ezizenzekelayo ezivumela ukuba sikwazi ukuqhuba kuyo nayiphi na i-engile. Kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezingqukuva, oku kusenza sikwazi ukufikelela kwijometri efanayo entsonkothileyo njengawo nawuphi na umatshini we-axis ezintlanu.
5-AXIS CNC yokugaya umthamo
Xa kukhankanywa umatshini oqhelekileyo we-5-axis, ubhekisa kwinani lezikhombisi apho isixhobo sokusika sinokuhamba, ukuba emva kokusetha isixhobo sokusika sihamba ngaphaya kwe-X, Y kunye ne-Z ii-axes ezimnyama kwaye sijikeleza kwii-A kunye ne-B, ngaxeshanye wokugaya kunye machining, kunye ezikumgangatho ophezulu umphezulu entanjeni ngomshini. Oku kuvumela iinxalenye ezintsonkothileyo nezintsonkothileyo okanye iinxalenye ezinamacala amaninzi zinokucutshungulwa ukuya kuthi ga kumacala amahlanu endawo kuseto olunye. Oku kuxhasa iinjineli zoyilo ukuyila izinto ezininzi ezinokuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kwemveliso yokugqibela ngaphandle kwenkqubo enomda.
Izinto eziluncedo ze-5-Axis CNC Milling
Ukugqiba umphezulu womgangatho ophezulu: Kuyenzeka ukuba kuveliswe izixhobo zokugqiba ezikumgangatho ophezulu ngokusetyenziswa kweemveliso ezimfutshane ngesantya esiphezulu sokusika, esinokunciphisa ukungcangcazela okuhlala kwenzeka xa kusenziwa imingxunya enzulu ngenkqubo ye-3-axis. Yenza umphezulu wokugqiba umphezulu emva koomatshini.
Ukubeka indawo ngokuchanekileyo: i-axis ezi-5 zokugaya ngaxeshanye kunye nokuchaneka kubaluleke kakhulu ukuba iimveliso zakho ezigqityiweyo kufuneka zihambelane nomgangatho ongqongqo kunye nokusebenza komsebenzi. I-5-axis CNC machining ishenxisa isidingo sokuhambisa isiqwenga somsebenzi phakathi kweendawo zokusebenzela ezininzi, ngaloo ndlela kuncitshiswa umngcipheko wempazamo.
Amaxesha amafutshane okukhokela: Ukuphuculwa kokukwazi komatshini we-5-axis kukhokelela ekunciphiseni kwamaxesha emveliso, aguqulela kumaxesha amafutshane emveliso xa kuthelekiswa nomatshini we-3-axis.
Isinyithi: IAluminiyam, intsimbi engenanto, iCopper, iSinyithi, iBras, iTitanium, isilivere ethandekayo, iBronze, njl.
Iiplastikhi ezinzima kunye nezinye izinto: Inayiloni, iAcetal, iPolycarbonate, iPolystyrene, iAlicrylic, iFiberglass, iCarbon fiber, iTeflon, ABS, PEEK, PVC, njl.